ISONJULULWE: WINDOWS 10 UKUQALA KANCINCI NOKUCIMA EMVA KOHLAZIYO LWEWINDOWS - WINDOWS 10
Isonjululwe: Windows 10 ukuqala kancinci nokucima emva koHlaziyo lweWindows
Ngaba yakho Windows 10 ikhompyuter ithatha imizuzu ngaphambi kokuba icime? Ukhe waqaphela Ukuqala Windows 10 ikhompyuter ithathe ixesha elide kakhulu kunangaphambili? Inani labasebenzisi ingxelo Windows 10 ukucima kancinci ingxaki, ixesha lokuvala liye lenyuka ukusuka kwimizuzwana eli-10 ukuya kwimizuzwana engama-90 emva kohlaziyo lweWindows lwamva nje. Isenokuba yifayile yenkqubo eyonakeleyo okanye i-buggy windows ehlaziya ibangela Windows 10 ukucima kancinci. Okanye iinkqubo zokuqalisa zichaphazela ixesha lokuqalisa.
Iziqulatho umboniso 1 Windows 10 Takes Forever to Shutdown 1.1 Qalisa isisombululo seMbane 1.2 Ukusetha kwakhona isiCwangciso saMandla 1.3 Cwangcisa isicwangciso samandla Ukusebenza okuphezulu 1.4 Khubaza ukuqala ngokukhawuleza 1.5 Ukulungisa iifayile zenkqubo 1.6 Hlaziya uMqhubi weGraphics 1.7 I-registry yefestile yeTweak
Apha sidwelise izisombululo ezimbalwa ezingalungisi kuphela Windows 10 iingxaki zokuqalisa kunye nokucima kodwa zilungiselela nokusebenza kwenkqubo.
Into yokuqala esincomela ukujonga kwaye uqiniseke ukuba iiwindows ezihlaziyiweyo ezifakwe kwikhompyuter yakho.
Faka uhlaziyo lwamva nje lweWindows
windows i-10 pin kwibar yomsebenzi ayisebenzi
Vula usetyenziso lweesetingi usebenzisa isitshixo sewindows + mna
Cofa kuHlaziyo kunye nokhuseleko emva koko ukhethe uhlaziyo lweWindows,
Ngoku nqakraza Jonga uhlaziyo iqhosha ukuvumela ukhuphelo windows uhlaziyo kwiseva yeMicrosoft.
Nje ukuba uyenze qala ikhompyuter yakho ukufaka uhlaziyo.
Le nkqubo ayizukulungisa iibugs kuphela kodwa iphinde ilungise abaqhubi bakho abanesiphoso abanceda ukulungisa ingxaki.
Khubaza iiNkqubo zokuQalisa
Ukukhubaza ezi nkqubo zokuqalisa kunciphisa ukusetyenziswa kwezixhobo kunye nokunyusa isantya sekhompyuter yakho.
Vula isiphathamandla somsebenzi (Sebenzisa indlela emfutshane yebhodi yezitshixo Ctrl + Shift + Esc)
Hambisa kwithebhu yokuqalisa.
Apha ngqo kwiinkqubo zokuqalisa ezingafunekiyo kwaye ukhethe ukukhubaza.
Qaphela: Musa ukukhubaza izinto zokuQala ezenziwa nguMicrosoft.
Misa ii -apps ezisebenza ngasemva
uqhagamshelo kwinkonzo yohlaziyo lwewindows alunakusekwa.
Phinda ukhubaze ii -apps ekusebenzeni ngasemva, izixhobo zenkqubo yenkunkuma.
Vula usetyenziso loseto usebenzisa indlela emfutshane yeWindows + I,
Cofa kuBucala -> ii -apps zangasemva.
Ngaphantsi kwecandelo 'Khetha ukuba zeziphi iiapps ezinokuthi zisebenze ngasemva', cima iswitshi yokutshintsha yezixhobo ofuna ukuzithintela.
Qalisa isisombululo seMbane
Sebenzisa ukwakhiwa kwamandla okusombulula ingxaki okufumana ngokuzenzekelayo kunye nokulungisa ukucothisa okukhutshiweyo Windows 10 ikhompyuter okanye ilaptop.
uyisusa njani isebenze windows 10 watermark ngaphandle kwemveliso
Cinezela Isitshixo selogo yeWindows + mna ukuvula Useto .
Cofa Uhlaziyo kunye noKhuseleko .
Khetha Ingxaki kwicala lasekhohlo.
Ngoku nqakraza Amandla kwaye ucofe Qalisa isisombululo .
Landela imiyalelo ekwi-screen ukugqiba inkqubo.
Qalisa ikhompyuter yakho ukufaka utshintsho.
Ukusetha kwakhona isiCwangciso saMandla
Ukusetha kwakhona isicwangciso sakho samandla kunokuba luncedo ekulungiseni umba wangoku. Ukuba usebenzisa isicwangciso samandla esenziwe ngokwezifiso zama ukuseta kwakhona kube kanye. Ukuseta kwakhona isicwangciso samandla ngaphakathi Windows 10:
Yiya kwimenyu 'yokuQala' kwaye uthayiphe 'Iphaneli yokulawula' emva koko ucofe iqhosha elithi 'Ngena'.
Ukusuka kwifilter ephezulu ngasekunene, khetha 'ii icon ezinkulu' kwaye uhambe uye 'kwi-Power Options',
Cofa kwaye uvule 'ukhetho lwamandla'.
Khetha isicwangciso samandla ngokweemfuno zakho kwaye ucofe ku 'Guqula useto lwesicwangciso'.
Cofa ku 'Guqula useto lwamandla aphezulu'.
Kwiindlela zokukhetha amandla kwiwindows, cofa kwiqhosha 'Buyisela okungagqibekanga kwesicwangciso'.
Cofa kwindawo ethi 'Faka isicelo' emva koko ucofe iqhosha elithi 'Kulungile'.
Cwangcisa isicwangciso samandla Ukusebenza okuphezulu
Njengoko igama libonisa chaza olu khetho kukusebenza okuphezulu. Cwangcisa isicwangciso samandla sokusebenza okuphezulu ngokulandela la manyathelo alandelayo.
Iphaneli yokuLawula evulekileyo,
Khangela kwaye ukhethe ukhetho lwamandla
Apha khetha iqhosha leRadiyo Ukwenza okuphezulu phantsi kokukhetha okanye ukwenza ngokwezifiso isicwangciso samandla.
Ukuba awuyifumananga Ukwenza okuphezulu inkcitho yenza ukufihla izicwangciso ezongezelelweyo ukuze ufumane.
Khubaza ukuqala ngokukhawuleza
Windows 10 Inqaku lokuqalisa elikhawulezileyo eliyilelwe ukunciphisa ixesha lokuqalisa ngokulayisha kwangaphambili ulwazi ngaphambi kokuba iPC yakho icime. Kodwa xa inikwe amandla kwaye ucima ikhompyuter, zonke iiseshoni zingenile kwaye ikhompyuter ingena kwi-hibernation enokuthi icothise isantya sokuvala ikhompyuter yakho. Kwaye ukukhubaza ukuqala ngokukhawuleza kubonakala kusonjululwe ingxaki yokucima kancinci kubasebenzisi abathile.
Iphaneli yokuLawula evulekileyo
Guqula Jonga ngeempawu ezinkulu kwaye ucofe Ukhetho lwaMandla .
Cofa kuKhetha okwenziwa ngamaqhosha amandla
Emva koko cofa iiSetingi zotshintsho ezingekhoyo ngoku
Apha qiniseka ukuba sukukhangela ukhetho lokuqalisa ngokukhawuleza phantsi koseto lokuvala.
Ukulungisa iifayile zenkqubo
Kukho amathuba ngenxa yenkqubo yefayile eyonakeleyo ithatha ixesha elininzi ukuvala ikhompyuter yakho. Sebenzisa uMhloli weFayile yeNkqubo (i-SFC) ngokulandela amanyathelo alapha ngezantsi ukulungisa iifayile zenkqubo eyaphukileyo kwaye mhlawumbi isisombululo se-woking ukulungisa iiwindows 10 zokucima ingxaki.
Kwimenyu yokuqala yokukhangela i-cmd, yenza iziphumo zokukhangela ekunene nqakraza kumyalelo wokukhethwa kokukhetha usebenze njengomlawuli,
Ngoku kuhlobo olukhawulezayo lomyalelo wewindows sfc / scannow kwaye ucinezele iqhosha lokungena,
Oku kuyakuqala ukuskena iifayile zenkqubo ezilahlekileyo ezilahlekileyo, ukuba kufunyenwe nayiphi na into eluncedo ye-sfc ibabuyisele ngokuzenzekelayo ngokuchanekileyo kuphela.
Kufuneka ulinde ukuqinisekiswa kuphela 100%.
Nje ukuba uyenze qala kwakhona iPC yakho ukufaka utshintsho, kwaye ujonge ukuba ixesha lokucima ikhompyuter liphuculwe.
Hlaziya uMqhubi weGraphics
Kwakhona ukuba ikhompyuter yakho icotha ukuqala okanye ukucima emva kohlaziyo lweWindows, inokubonisa ukuba kukho ukungangqinelani phakathi kohlaziyo lweWindows kunye nabaqhubi bekhompyuter yakho, ngakumbi umqhubi wemizobo. Umqhubi wamva nje unokubonelela ngokuhambelana okungcono nokukhutshwa okutsha kweWindows 10. Ke ngoko, kufanelekile ukuzama nokuhlaziya umqhubi wemizobo kwikhompyuter yakho.
Cinezela iWindows key + R, chwetheza yitshise.msc kwaye ucofe kulungile,
Oku kuya kuvula umphathi weDivayisi kwaye ubonise lonke uluhlu lwabaqhubi befowuni,
Yandisa 'Bonisa iadaptha', cofa ekunene kumqhubi wekhadi yemizobo kwaye ukhethe 'Hlaziya umqhubi'.
Cofa uPhendla ngokuzenzekelayo kwisoftware yomqhubi ohlaziyiweyo kwaye ulandele imiyalelo yescreen ukuvumela uhlaziyo lweWindows ukukhuphela umqhubi wemizobo wamva nje ukuba ukhona.
wifi icon engekho Windows 7
Kwakhona, unokukhuphela kwaye ufake umqhubi wemizobo wamva nje kwiwebhusayithi yomenzi wezixhobo.
I-registry yefestile yeTweak
Ukongeza, tweak windows irejista yokunyanzela ukuvalwa kwenkqubo ngokukhawuleza ngokulandela amanyathelo angezantsi.
Cinezela iWindows key + R, chwetheza regedit kwaye ucofe kulungile,
Oku kuyakuvula umhleli wobhaliso lweWindows, uvuselele isitshixo esilandelayo: Ikhompyuter HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Control
Apha kwipaneli ephakathi cofa kabini I-WaitToKillServiceTimeout kwaye usete ixabiso phakathi kwe-1000 ukuya kwi-20000 ehambelana nexabiso phakathi kwe-1 ukuya kwi-20 imizuzwana ngokulandelelana.
Qaphela: Ukuba awuyifumani i-WaitToKillServiceTimeout emva koko ucofe kulawulo -> cofa eNtsha> Ixabiso lomtya kwaye unike igama le String njenge I-WaitToKillServiceTimeout. emva koko usete ixabiso phakathi kwe-1000 ukuya kwi-20000
Vala umhleli wobhaliso kwaye uqalise kwakhona iPC yakho ukufaka utshintsho.
Ngaba ezi zisombululo ziye zanceda ukulungisa iiwindows 10 zokuqalisa kunye nokucima iingxaki? Sazise ngezimvo ezingezantsi.
Lungisa iBootmgr ilahlekile Cinezela u-C ++ no-Del ukuqala kwakhona Windows 10, 8, 7
Iindlela ezisemthethweni zokuCothisa Windows 10 hlaziya ufakelo (uHlelo lwasekhaya)
Igcinwe: Kernel_security_check_failure Windows 10 (5 izisombululo ezisebenzayo)
Isonjululwe: Icon yeWi-Fi ilahlekile kwitreyi yenkqubo Windows 10 Laptop
Iadaptha zenethiwekhi zilahlekile emva Windows 10 uhlaziyo lwe-1909? Zama ezi zisombululo
ikhonkco windows ilayisensi kwiakhawunti yeMicrosoft
akukho vidiyo enohlobo lwe-mime oluxhaswayo olufunyenweyo
Umqhubi we-nvidia ophazamisa iiwindows 10 2017
I-dvd drive ayifundanga windows 10
windows 10 ukhuphelo unamathele kwiipesenti ezingama-99
windows 10 ukunqamla kwi-wifi
windows 10 ukuxhumeka kwe-intanethi kuyehla